काे हुन् कन्निका ? जसले पारस शाहकाे ‘एटीएम’ नै लगेर कराेडाैं लु’टिन् – Dainik Sangalo
काे हुन् कन्निका ? जसले पारस शाहकाे ‘एटीएम’ नै लगेर कराेडाैं लु’टिन्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २२, २०७८ समय: १२:५४:०४
बेला-बेलामा वि,वा,दि,त बनेर चर्चामा आइरहने पात्र हुन्, पूर्व युवराज पारस शाह। पार’सको नाम सुन्नबित्तिकै उनकी पत्नी हि’मानी शाहको चित्र पनि झ,’ल्किहाल्छ। त्यसो त हिमानीलाई नेपालकै आकर्षक म’हिलाको रुपमा पनि चिनिन्छ।
‘नेपाल’ म्यागाजिनले त केही वर्षअघि हिमा’नीको तस्वीरलाई कभर फोटो बनाएर देशकै सबैभन्दा सुन्दर र आकर्षक महिलाको रुपमा घो,’षणा गर्यो। सर्वसाधारणकोे दृष्टिकोणमा हिमानी र पारस लोकप्रिय दम्पती हुन्। तर पारसको प्रेम सम्बन्धबारे चर्चा गर्ने हो भने हिमानी ओझेलमा पर्छिन्।
किनकि पारसले अनौपचारिक रुपमा विभिन्न युवतीहरुसँग सम्बन्ध गाँसे। सन् २००८ मा पारस थाइल्याण्डमा थिए। उनी त्यहाँ क’न्निका चाइसान नामकी एक थाइ युवतीसँग प्रेममा थिए। पा’रसले त्यस सम्बन्धलाई गु,’पचुप पार्न निकै प्रयास गरे। तर सकेनन् ।अन्ततः पारस र कन्निकाबीच सम्बन्ध नेपाली मिडियालाई पनि थाहा भयो नै।
Last Updated on: September 7th, 2021 at 12:54 pm